E-Ganacsiga Macaamiisha-Koowaad: Xallo Smart ah oo ku saabsan Hal shay oo aanad awood u yeelan karin inuu khalad ku dhaco | Martech Zone
Udub-u-kicinta xilligii masiibo ee xagga ganacsiga e-commerce waxay la timid himilooyin macaamiil oo la beddelay Mar alla markii lagu daro qiime, ku-shubashada khadka tooska ah ayaa hadda noqotay barta koowaad ee macaamiisha taabashada inta badan dukaamada tafaariiqda. Iyo sida mashiinka ugu weyn ee isdhexgalka macaamiisha, muhiimada ay leedahay taageerada macmiilka dalwaddu waa mid aad u sareeya.
Adeegga macaamiisha e-commerce wuxuu la yimaadaa caqabado iyo culeysyo cusub. Marka hore, macaamiisha guriga ayaa waqti badan ku bixinaya khadka tooska ah intaysan qaadan go'aannada iibsigooda.
81% jawaabeyaashu waxay ku baareen wax soo saarkooda khadka tooska ah kahor intaysan qaadan go'aanka iibsiga. Tiradaasi waxay ka dhigan tahay koror afar laab ah celceliskii cudurka ka horreeyay ee kaliya 20%. Intaa waxaa dheer, daraasadda ayaa lagu ogaaday in macaamiisha ay hadda ku qaataan celcelis ahaan 79 maalmood oo ay ku soo ururiyaan macluumaadka khadka tooska ah ka hor intaanay dooran badeecad ama shirkad go'aammadooda ugu waaweyn ee iibsiga.
Dunida sii kordheysa ee xiisaha leh, xiisaha macaamiisha waa in noqo mudnaanta koowaad ee shirkadda. Ku noqo 2017, qiyaastii 93% macaamiisha ayaa sheegay in dib u eegista khadka tooska ah ay saameyn ku yeesheen go'aannadooda tafaariiqda-iyadoo waqti badan gacmaheena lagu haysto iyo ganacsi badan oo ka dhacaya shaashadahayada, tiradaas ayaa kordhay oo kaliya. Tafaariiqleyda mar dambe ma awoodi karaan inay ku jabaan khibradda macaamiisha khadka tooska ah. Hubinta isdhexgalka wanaagsan, isdhexgalka muuqaalka ah maahan xeelad iib, laakiin waa istiraatiijiyad badbaado. Waxayna noqotay mid aad muhiim ugu ah da'da-QAADASHADA.
Hoos waxaa ku yaal waxoogaa ka mid ah xeeladaha adeegga dhijitaalka ah ee iibiye kasta oo tafaariiqle ah u baahan yahay.
Tech for Speed ​​Better: Maxaa yeelay Waqtigu Waa Wax Walba
Anshaxa Internetku waa mid bilow ah. Waxaa suuragal ah in naloo adeegsado safka xarumaha waaweyn ee wax laga iibsado, laakiin cidina ma rabto inay hareeraha ka sugto taageerada dalwaddii. Tani waxay caqabad gaar ah u tahay dukaamada tafaariiqda e-commerce, oo aan si xoog leh 'u xiri karin albaabbada macmalka ah' marka saacaddu dhacdo 7 fiidnimo.
Si looga takhaluso waqtiyada sugitaanka dalbanka ah loona maareeyo dalabkan cusub ee saacad kasta, tafaariiqleyda ayaa si aqlabiyad leh ugu jeesanaya sheekaysiga xalalka adeegga macaamiisha. Chatbots waxay adeegsadaan sirdoon macmal ah si ay si firfircoon ula macaamilaan macaamiisha, ha ahaato qoraal, farriin-bogga, ama taleefanka. Heerka korsashada ee bukaan-socodka ayaa ku faafay dhammaan safka, iyada oo tafaariiqlayaashu ay arkeen in maareynta macmiilka otomaatigga ah ay yareyneyso qarashka ay ku shaqeynayaan. Chatbots waxay bixiyaan habab toos ah oo loogu talagalay aruurinta lacag bixinta, amarada ka shaqeynta ama soo celinta, iyo u adeegida macaamiisha mustaqbalka-dhammaantood iyada oo aan la garaacin.
Sababtan awgeed, Warbixintii ugu dambeysay ee Business Insider waa inaan lala yaabin. Waxay saadaaliyeen in tafaariiqda macaamiisha ay ku bixiso sheekooyinka adduunka oo dhan ay gaari doonaan $ 142 bilyan saddexda sano ee soo socota. Waxay sidoo kale ogaadeen in qiyaastii 40% dadka isticmaala internetka dhab ahaantii door bidayso si loola macaamilo chatbots nidaamyada kale ee taageerada sida wakiilada dalwaddii.
Tech for Khibrad Isku-dhafan: Heer Cusub oo Macaamiil ah
Ganacsiga elektaroonigga ah waa mid u gaar ah inuu ka dhici karo meel kasta. Noocyadu had iyo jeer kuma kalsoonaan karaan in macaamiisha ay fadhiyaan guriga horjoogayaasha cabbirka buuxa iyadoo ay websaydhkoodu ku soo bandhigayaan muuqaal qumman. Badanaa, macaamiisha waxay kula macaamilaan websaydhka sumadda taleefannadooda gacanta dhexdeeda hawl maalmeedka. Laakiin xog ay soo aruurisay Statista waxay tilmaamaysaa in kaliya 12% macaamiisha ay tixgeliyaan khibradooda ganacsi ee mobilada.
Dhaqdhaqaaqa dalwaddu wuxuu cadaadis cusub saarayaa tafaariiqleyda si loo wanaajiyo macmiilkooda macaamiisha dhammaan goobaha taabashada macaamiisha, iyo markay timaaddo moobiilka, waxaa si cad u muuqata in la qabanayo. Laakiin tafaariiqleyda sii waday inay maal-gashadaan xallintooda CRM (maaraynta xiriirka macaamiisha) waxay naftooda ka heleen meel wanaagsan oo ay ku maareeyaan dalabkan xilligii COVID. Isku-darka CRM ee isku-dhafan ayaa u oggolaanaya tafaariiqleyda inay maareeyaan waayo-aragnimadooda macmiil dhammaan kanaallada, iyagoo ku milmaya xogtooda keydka ah iibkooda khadka tooska ah, isdhexgalka wada-sheekeysiga, ka-qaybgalka warbaahinta bulshada, iyo natiijooyinka ololahooda emaylka.
Kaliya maahan caawintaani inay bixiso khibrad macmiil oo la isku halleyn karo, taas oo xogtoodu ay tahay mid aamin ah oo joogto ah meelo badan oo taabasho ah, laakiin sidoo kale waxay leedahay faa iidooyin dheeri ah oo ah in dhammaan macluumaadka muhiimka ah lagu dhajiyo hal meel oo caadi ah. Soo iibsiga xogta otomaatiga ah ee dhacdooyinka kala duwan ayaa loo hagaajin karaa hal madal; amarrada si dhakhso leh ayaa loo buuxiyaa, soo celinta ayaa loo shaqeeyaa si hufan, milkiilayaashuna waxay hayaan dhammaan xogta ay weydiisan karaan inay ku xoojiyaan suuqgooda.
Teknolojiyada loogu talagalay Suuqgeynta Bartilmaameedka ah: Waxa aan illaa iyo hadda ognahay
Iyada oo xog badan ay dhex socdaan, suuqleyda dhijitaalka ah waxay tijaabinayaan dhowr jiho oo kala duwan. Istaraatijiyadaha guuleysta illaa hadda waxaa ka mid ah korsashada xaqiiqda la kordhiyay. Xaqiiqda la kordhiyay (AR) waxay xallisaa dhibaatada weyn ee xilligii COVID: sideen ugu kalsoonaadaa badeecada haddii aanan arki karin dukaan dhexdiisa? Si dhakhso leh, kooxaha suuqgeynta caqliga leh ayaa helay xalka. Khibradaha AR waxay u ekeysiin karaan muuqaalka alaabta guriga qolka fadhiga, xajmiga xajmiga ee qaab gaar ah, hooska lipstick ee wejiga macaamilka.
AR waxay qiyaasta ka saareysaa dukaamaysiga internetka, waxayna horeyba u siineysaa dukaamada tafaariiq aan caadi aheyn; dukaamada tafaariiqleyda leh is-dhexgal, soo-saarista alaabada 3D-ka ayaa ka warbixiyay heerka beddelka 40% ka sarreeya. Sameynta dammaanad aamin ah in tafaariiqlayaashu aysan rabin inay ka qaybgalaan iibintooda sare goor dhow, Statista ayaa qiyaastay in suuqa dhabta ah ee la kordhiyay uu gaari doono 2.4 bilyan oo isticmaale sanadka 2024.
Ugu dambeyntiina, kooxaha suuqgeynta xariifadda ahi waxay ku tiirsan yihiin in badan oo shakhsi ahaaneed ah istiraatiijiyad iib ah oo horseed ah, waana sax. Ganacsiga elektaroonigga ah wuxuu bixiyaa hal shay oo aan waligeen iskaga yeeli karin dukaamada: dukaameyste kasta oo internetka ah 'wuu ku socon karaa' meel gebi ahaanba ka duwan, dukaamo dalwad leh. Shakhsiyeynta talooyinka wax soo saarka ee dhadhanka dukaanka khadka tooska ah waxay kordhineysaa suurtagalnimada macaamiisha inay helaan wax indhahoodu dhaqso u qabtaan. Samaynta waxqabadyada shaqsi ahaaneed waxay ka dhigan tahay iyadoo la adeegsanayo xog laga soo iibsaday biraawsarkii hore iyo waxqabadka goobta si loo saadaaliyo dhadhankeeda; hawl kale oo noqotey mid aad looga heli karo iyada oo loo marayo awoodaha sirdoonka farsamada. Customization waxay noqon doontaa tiir ka dambeeya ganacsiga COVID, iyadoo la beddelayo muuqaalka rajooyinka macaamiisha.
Chatbots, CRM-yada isku dhafan, iyo xalalka xogta xariifka ah ayaa ka caawin kara xirfadleyda tafaariiqda inay maareeyaan dalabkooda ganacsi e-ganacsi. Xogta ku kordhay iibka qadka waxay ka sameeyn kartaa suuq geyn caqli gal ah, maalgashiga AR-ga wuxuu umuuqdaa sharad aamin ah. Ugu dambeyntii, si kastaba ha noqotee, macaamilku wuxuu had iyo jeer lahaan doonaa ereyga ugu dambeeya; badbaadada kadib-COVID waxay kuxirantahay tafaariiqleyaasha inay kahor dhigaan macaamilka (dalwadlaha).
Tags: Bandhigyada alaabada 3daisirdoonka macmalxaqiiqda la kordhiyaymacaamil ganacsisheekooyinkawaayo-aragnimo-channel channelmacmiil marka horemacaamiil-centrice-commerceecommercecaasimada gewaayo-aragnimo isku dhafantafaariiqda is-dhexgalkashakhsi ahaaneedtirakoobka
Zain Jaffer waa Aasaasihii iyo Agaasimihii guud ee Zain Ventures, shirkad maalgashi oo bixisa maalgelinta adduunka oo dhan bilowga tikniyoolajiyadda, guryaha, iyo sinnaanta gaarka loo leeyahay. Iyadoo ah ganacsade iyo maal-galiye, Zain wuxuu si firfircoon ula taliyaa oo u maal gashadaa bilawga tiknoolajiyada xuduudaha ee Mareykanka oo dhan.